उजुरीकर्ता नै भ्रष्टाचारका आरोपी भेटिएपछि | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
उजुरीकर्ता नै भ्रष्टाचारका आरोपी भेटिएपछि
प्रकाशित मिति १९ श्रावण २०७६, आईतवार ०९:५६ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । विकास निर्माणका काममा प्रायः ठेकेदार र कर्मचारीबीच मिलेमतोमै घुस लेनदेन हुन्छ । कहिलेकाहीँ असमझदारी भएपछि मात्र विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्ने गरेको छ ।
त्यस्तै, एउटा उजुरी गत माघमा अख्तियारमा प(यो । साबिकको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरका तत्कालीन सिडिई लालु गिरीले दुःख दिएर १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको भन्दै एम.के.रवाई.पी.जे.भी.का प्रतिनिधि देवजंग शाहीले आयोगमा उजुरी गरे । त्यसको प्रमाणसहित आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरी गत २३ फागुनमा गिरीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो ।
तर, जब अदालतमा मुद्दा पुग्यो, शाहीको बोली फेरियो । घुस नभई आफूहरूबीच व्यक्तिगत लेनदेन भएको भनेर उनले बयान दिए । आफैँले दिएको उजुरीविपरीत यसरी अदालतमा गएर बयान फेरेमा त्यो पनि भ्रष्टाचार हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा उल्लेख छ ।
विशेष अदालतमा गएर बयान फेरेमा उजुरीकर्तालाई समेत आरोपीका रूपमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान सो ऐनमा छ । सोहीअनुसार सोमबार उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उनलाई ६ महिनादेखि चार वर्षसम्म कैद र १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना माग लिएर आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
नक्कली बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा मोबिलाइजेसन रकम भुक्तानी दिएको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले समेत अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । ब्युरोले छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । नियमितता र विवादकै कारण सो सडक स्तरोन्नतिको काम हाल अलपत्र छ ।
शाहीले यसअघि आयोगमा दिएको उजुरीमा पेस्की तथा रनिङ बिल फस्र्योटका लागि तीनपटक गरेर १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको उल्लेख गरेका थिए । उनले सिडिई गिरीकी श्रीमती मीराको खातामा पाँच लाख ५० हजार र साथी सुशील श्रेष्ठको खातामार्फत ११ लाख रुपैयाँ दिएका थिए ।
दुई लाख भने कार्यालयमै नगद दिएको उल्लेख गरेका थिए । १२ करोड ५५ लाख ९७ हजार सात सय ५४ रुपैयाँबराबरको सो ठेक्काको पेस्कीबापत ५५ लाख ३० हजार र मोबिलाइजेसनका लागि भनेर भुक्तानी लिएका थिए । त्यसबापत १८ लाख ५० हजार घुस गिरीले लिएका हुन् ।
अख्तियारमा उजुरी गरेपछि आफूलाई पटक–पटक फोन गरेर सहयोग गर्न गिरीले आग्रह गरेका थिए । तर, शाहीले मानेनन् । त्यससम्बन्धी एसएमएसलाई समेत आरोप पत्रमा समावेश गरिएको थियो । अहिले आएर सिडिई गिरीलाई जोगाउन शाहीले अदालतमा बयान फेरेका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५५ मा ‘अनुसन्धानको काम–कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।
सोहीअनुसार यसअघि उनलाई साक्षी बनाइएको थियो । ‘तर, निजले गरेको सहयोग अन्य सबुत वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ,’ भन्ने प्रावधान सोही दफामा छ । जसअनुसार शाहीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, टेकुका जनस्वास्थ्य अधिकृत रामअवतार गुप्ता एक लाख घुससहित पक्राउ परेका छन् । जनचेतनामूलक सामग्रीहरू रेडियोमा प्रचार–प्रसार गरेबापतको भुक्तानीका लागि उनले घुस मागेका थिए ।
गुप्ताबाट हैरान भएका सेवाग्राहीले घुस दिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई खबर गरेका थिए । आयोगको टोलीले बबरमहलस्थित वन विभागको परिसरबाट उनलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो ।
बर्दिबासम टिपर पल्टिँदा १० जना घाइते
बर्दिवास । महोत्तरीको बर्दिवासमा ढुंगा बोकेको टिपर दुर्घटनाको हुँदा दश जना घाइते भएका छन् । ढुङ्गा लोड गरिएको ना…
एक महिने अधिकमास समाप्त, कामना राखेर कर्म गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौँ । जेठ १ गते मंगलबार बेलुकी पाँच बजेर ५३ मिनेटदेखि शुरु भएको अधिकमास बिहीबार बिहान २ बजे समाप्त…
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रालयको सचिव र विभागीय प्रमुखहरूको सरुवामा कीर्तिमान कायम गरेका छन्। कार्यकाल…
कलेजो फेल हुने ३ कारण र १६ लक्षण
काठमाडौं । पनि सामान्य देखिन सक्छ । कसैकसैलाई रोगको सुरुवातीमा कमजोरी महसुस हुन सक्छ । छिट्टै थकाइ लाग्ने, काम गर्न…
गोविन्द केसी तारिखमा रिहा, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाएको आरोपको प्रमाण पेश गर्न अदालतको आदेश !
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अपहेलना मुद्दामा डा. गोविन्द केसीको बहस सकिएको…
वाइडबडी खरिद प्रक्रियाः सुरुवातबाटै छानबिन गर्दै संसदीय समिति
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदको सुरुवातबाटै संसदीय छानबिन समितिले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विमान खरिद…